Page2of 1,457«1234567...»Last »
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် လူသိများသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ပန်ဆယ်လိုသည် ၆၆ (ဃ)ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံထားရမှုကိုဖြေရှင်းရန် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီက တာမွေရဲစခန်းသို့ရောက်ရှိလာပြီး တစ်နာရီနီးပါးကြာ ကိုယ်တိုင်အစစ်ခံချက် own statement ပေးခဲ့သည်။
Credit to ဓာတ်ပုံ -ဇော်မိုးလွင်/The Voice
Interviewed with May Sweet
Interviewed with Moe set Wine (aka) Yang Xinrong (杨鑫荣)
Celebrity Singer run away with million of money from friend
ကျွန်တော်တို့ ကချင် မျိုးနွယ်စုမှ ရဝမ်လူငယ်လေးများ
ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားပြီး ပထမဦးဆုံး ရိုက်ကူး၊ သရုပ်ဆောင်ထားသော #ဂီလာ ( သူရဲကောင်း) လို့အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ၁၉၊၁၊၂၀၁၈ မှစပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ဧရာရုပ်ရှင်ရုံမှာ အစပြု ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ အားလုံး လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးကြပါဦးခမျာ 🤗🤗👌👌
ရန်ကုန်နှင့်မြို့ကြီးများမှ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်များမပါဝင်သည့်အတွက် ရုံတင်ခွင့်ရရန် အခက်အခဲရှိပေမယ့် နယ်ရုံကပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုက ကျွန်တော်တို့လူငယ်များအတွက် ဆက်လက်ကြိုးစားရန် တွန်းအားကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါဗျာ 😇 😇
Guess who is this Myanmar celebrity?
ဆရာဝန်မလေး ” ထွန်းပုလဲရတနာ ”
Miss Myanmar International 2017(1st Runner)
Miss Myanmar World 2016 ( Top.10)
Miss Myanmar Yangon 2015
Miss Tourism Myanmar 2010
Miss Myanmar World 2014 winner Wyne Lay
Academy bayluWa’s donation
Eindra kyaw Zin’s Cover photos
Wine Su Khine Thein’s upcoming wedding news
Stefanie Sun’s wedding pictures
Taw Win Garden Hotel opening Ceremony
R Zarni, Phyu Phyu Kyaw Thein and Wine Su Khine Thien to come to Singapore
Myanmar Karaoke VCD starring Sai Sai & Wut Hmone
Photo of the Day UNICEF ?????
Sung Tin’s selfie @ Hotel Shwe Pyi Thar
Funny Joke: Too Much to Drink